Olee Ihe Ị Ga-eme Ka Ị Bụrụ Ezigbo Nne Ma Ọ Bụ Nna?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ị̀ na-akụziri ụmụ gị ka ha hụ Chineke n’anya?
Ọ bụrụ na di na nwunye hụrụ ibe ha n’anya, na-akwanyekwara ibe ha ùgwù, ụmụ ha ga-amụta ihe bara uru n’aka ha. (Ndị Kọlọsi 3:14, 19) Ezigbo ndị nne na nna na-ahụ ụmụ ha n’anya, na-ajakwa ha mma otú ahụ Jehova Chineke si jaa Ọkpara ya mma.—Gụọ Matiu 3:17.
Nna anyị nke eluigwe na-ege ndị ohu ya ntị, ọ na-achọkwa ịma otú obi dị ha. Ndị nne na nna kwesịrị iṅomi ya. Ha kwesịrị ịna-ege ụmụ ha ntị ma ụmụ ha kọwara ha ihe dị ha n’obi. (Jems 1:19) Ha kwesịkwara igosi na ha ghọtara otú obi dị ụmụ ha, ọ bụrụgodị na ihe ụmụ ha na-ekwu adịghị ha mma.—Gụọ Ọnụ Ọgụgụ 11:11, 15.
Olee otú ị ga-esi azụ ụmụ gị ka ha baa uru?
Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna, i nwere ikike ịgwa ụmụ gị ihe ị chọrọ ka ha mee. (Ndị Efesọs 6:1) Mụta ihe n’aka Chineke. Otu ụzọ Chineke si egosi na ọ hụrụ ụmụ ya n’anya bụ na ọ na-enye ha iwu, gwakwa ha nsogbu ha ga-abanye na ya ma ha mebie iwu ya. (Jenesis 3:3) Ma, ọ naghị amanye ụmụ mmadụ irubere ya isi. Kama, ọ na-agwa ha uru ha ga-erite ma ha rubere ya isi, mee ihe dị mma.—Gụọ Aịzaya 48:18, 19.
Gbalịa kụziere ụmụ gị ka ha hụ Chineke n’anya. Ha ga na-akpa àgwà ọma ma gị na ha ọ̀ nọ ma ọ bụ na unu anọghị. Chineke na-eme ihe ọ chọrọ ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụ gị hụ Chineke n’anya, i kwesịkwara ịna-eme ihe ndị ga-egosi na ị hụrụ Chineke n’anya.—Gụọ Diuterọnọmi 6:5-7; Ndị Efesọs 4:32; 5:1.
Di na nwunye mụta nwa, hà nwere ike ịhụkwu ibe ha n’anya?